Tue, Dec 11, 2018 | 07:42:30 NST
कृषि अनुसन्धान परिषद् वार्षिक उत्सव मनाउँदै
काठमाडौ, बैशाख २५– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले सोमबार आफ्नो २१ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । कृषि क्षेत्र विस्तारको लागि २० वर्षअघि स्थापना भएको नार्कले यस अवधिमा बिभिन्न ४६ बालीका २ सय ४० उन्नत जात सिफारिस गरेको छ ।
महानगरपालिकामा सफा वडा घोषणा गरिने
काठमाडौ, बैशाख २३– काठमाडौ महानगरपालिकाले सफा वडा घोषणाको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । बिभिन्न २५ वडामा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनपछि तालिम शुरु भएको महानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
जाजरकोटमा गहुँ उत्पादन बढ्यो
जाजरकोट, बैशाख २३– यस बर्ष पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा गहुँ उत्पादन २५ प्रतिशतले बढेको छ । समयमा बर्षात भएको र रोग नलागेका कारण गहँुको उत्पादन धेरै भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
गोडमेल गर्न नजाने आलु धेरै फल्दैन
काठमाडौ, बैशाख २३ – गोडमेल गर्ने बेला जथाभावी जरा खल्बल्याउँदा आलुको उत्पादन घट्ने गरेको विज्ञहरुको भनाई छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका विज्ञ ढुण्डीराज शर्माका अनुसार किसानले गोडमेलमा ध्यान नपुर्याएकै कारण झण्डै २५ प्रतिशत आलुको उत्पादन घट्ने गरेको छ ।
भक्तपुरमा घरपालुवा पशुमा रेविजको प्रकोप
रमेश गिरी/ उज्यालो । भक्तपुर, बैशाख २२ – भक्तपुरको कटुञ्जेमा पशुहरुमा रेविज रोग फैलिएको छ । यस क्षेत्रमा एक साता यता १२ वटा घरपालुवा पशुमा रेविज रोग देखा परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । शुक्रबार भक्तपुर अस्पतालमा रेविज रोग र यसको रोकथामका बारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अर्जुन अधिकारीले रेविज रोकथामका लागि निःशुल्क भ्याक्सिन दिन सुरु गरेको बताउनुभयो । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु चिकित्सक डा. राम परीक्षण शाहले भक्तपुरको कटुञ्जे, दुवाकोट र...
कम तौलको युरिया मल पठाउने भारतीय कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने
काठमाडौं, बैशाख २१ – कम तौलको युरिया मल पठाउने एक भारतीय कम्पनीले कृषि सामग्री संस्थानलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । संस्थानका अनुसार झण्डै तीन महिना भारतको आइपीएल कम्पनीले कम तौल भएको युरिया मल पठाएको गुनासो संस्थानले गरेपछि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने भएको हो ।
१२ हजार हेक्टर जमिनमा रबर खेती गर्न प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं, बैशाख २१ – सुनसरी, मोरङ, झापा र इलामको १२ हजार हेक्टर जमिनमा रवर खेती गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अमेरिकी रबर एण्ड डेट्रोपा रिसर्च इन्ष्टिच्युटले किसान, सरकार र इन्ष्टिच्युटको सहकार्यमा रवर खेती गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
बाग्मतीमा फोहोर फाल्ने पक्राउ
काठमाडौ, बैशाख २०– पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि सुन्दरीजलसम्मको क्षेत्रमा अटेरी गरेको अभियोगमा बौद्ध प्रहरीले मंगलवार र बुधवार गरी आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा घर घरबाट पैसा उठाई फोहर संकलन गर्ने अनिता लामा र उनका सहयोगी रहेको प्रहरी नायव निरीक्षक श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
जथाभावी सल्लाको खोटो संकलन
बिमल बिष्ट/उज्यालो । डोटी, बैशाख २० – जंगलभरीका सल्लाका रुखहरुमा चार/पाँच ठाउँबाट बोक्रा निकालिएको छ । तिनै रुखबाट फेरि बोक्रा (खोटो) निकाल्न कामदारहरु जंगल पस्न थालिसकेका छन् । जथाभावी खोटो संकलन गर्दा सल्लाको वन मासिने संभावना बढेको भन्दै उपभोक्ताले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
कास्कीमा बिऊविजन र कृषि उपज मेला
पोखरा, वैशाख १९ –कास्कीको भदौरे तामागी गाविसमा, विऊविजन प्रर्दशनी र कृषि उपज प्रवद्र्धन मेला मंगलवार सुरु भएको छ । जैविक विविधता जोगाउदै पुराना विऊहरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले माछापुच्छ्र्रे विकास संघ र पञ्चासे कृषि विकास समितिले संयुक्त रुपमा मेला आयोजना गरेको हो ।
कृषिमा लगानी दोब्बर बनाउँछौ : मन्त्री पुन
बुटवल, बैशाख १९– अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले नयाँ बजेटमा कृषि क्षेत्रको लगानी दोब्बर बनाउने बताउनुभएको छ । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रबद्र्धन गर्ने नीति तयार भइरहेको बताउनुभयो ।
‘सिर्जना’ किसानको पहुँचमा छैन
काठमाडौ, बैशाख १८– गोलभेंडाको प्रचलित र लोकप्रिय सृजना जात देशका सबै किसानको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । माग अनुसार बिऊ उत्पादन हुन नसकेकाले समस्या रहेको केन्द्रीय तरकारी बिऊ उत्पादन केन्द्रले जनाएको छ ।
दाङका गाउँघरमा सुधारिएको चुल्हो
दाङ, बैशाख १८ – भान्सामा धुँवा नहुने र दाउरा पनि कम लाग्ने भएकपछि दाङमा सुधारिएको चुल्होको आकर्षण बढेको छ । अहिलेसम्म १६ हजार बढी सुधारिएको चुल्हो निर्माण भइसकेको चुल्हो निर्माण अभियान चलाउने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ ।
किसानलाई १० लाख फलफूलका विरुवा दिने
काठमाडौ, बैशाख १७ – फलफुल विकास निर्देशनालयले यो बर्ष १० लाख वटा फलफुलका बिरुवा किसानसम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ । स्याउ बाहेकका फलफुल लगाउने मौसम शुरु हुनै लागेकोले अहिले निर्देशनालय अन्र्तगत देशभर रहेका ४ सय ५० वटा नर्सरीमा फलफुलका बिरुवा उत्पादन, गोडमेल र काँटछाँटको काम भैरहेको बरिष्ठ फलफुल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
किसान भिण्डी खेतीतर्फ आकर्षित
काठमाडौं, बैशाख १६ - खानमा मिठो र आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले धेरै किसान अरु तरकारी जस्तै भिण्डी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । पहाड र तराईका सबै ठाउँमा सजिलै खेती गर्न सकिने भएकाले पछिल्ला वर्षहरुमा भिण्डी खेतीतर्फ किसान आकर्षित भएका कृषि विज्ञको भनाई छ । भिण्डीलाई अदुवा, बेसार लगायतका अरु बाली भएको ठाउँमा समेत लगाउन सकिन्छ ।
१२ ठाउँमा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना
नवलपरासी, बैशाख १६– नवलपरासीमा गाइभैसीको नश्लसुधार गर्न पशुसेवा कार्यालयले १२ वटा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरेको छ । स्थानीय गाइभैंसीको कृत्रिम गर्भाधानबाट उन्नत जातको बाच्छाबाच्छी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. उत्तम अचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
अदुवाको मुल्य बढेपछि बिक्री शुरु
भरत ईङ्नाम/उज्यालो । तेह्रथुम, बैशाख १४– तेह्रथुममा यस हप्तादेखि अदुवाको मूल्यमा सुधार आएको छ । सदरमुकाम म्याङ्लुङ्गमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ रहेको अदुवाको मूल्य बढेर १२ रुपैयाँ पुगेपछि किसानहरु खुशी भएका छन् । भाउ थोरै हुँदा किनबेच हुन छाडेको अदुवाको किनवेच पनि शुरु भएको छ ।
किसानलाई दिने अनुदानमा अनियमितता
बारा, बैशाख १४– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराले मिसन प्याज खेती अन्तर्गत किसानलाई दिने अनुदानमा अनियमितता भएको किसानले बताएका छन् । कृषि विकास कार्यालयले रकम लेनदेनको आधारमा प्रक्रिया नपुर्याएका किसान समुहलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
१४ करोडको लागतमा कृषि फारम
उदयपुर, बैशाख १४– १४ करोडको लागतमा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १३ खाटमन्दिरमा कृषि फाराम निर्माण गर्न थालिएको छ । ७ रोपनी क्षेत्रफलमा बंगुर, गाई, बाख्रा, माछा, मौरी, स्थानीयजातका कुखुरा पालिने फारमका सञ्चालक विष्णु खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
वर्षे धानको बीउ वितरण शुरु
ललितपुर, बैशाख १४ - जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ललितपुरले वर्षे धानको बीउ वितरण गर्न शुरु गरेको छ । कार्यालयले जिल्लाभित्र रहेका ८ वटा सेवा केन्द्र मार्फत किसान समूहलाई वर्षे धानको बीउ वितरण गर्न शुरु गरेको छ । ३४ हेक्टर जमिनमा लगाउन पुग्ने २५ सय किलो वर्षे धानको बीउ वितरण गर्न शुरु गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिपक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कास्कीका ४ गाविसमा अलमाण्ड खेतीको संभाब्यता अध्ययन
पोखरा, बैशाख १३– कास्कीका विभिन्न चारवटा गाविसमा आलमण्ड अर्थात् चिनियाँ बदामको व्यबसायिक खेतीका लागि बुधवारदेखि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भएको छ । सौन्दर्यका सामाग्रीमा प्रयोग गरिने तेलको मुख्य श्रोत, क्यान्सर विरुद्धको औषधी तथा आँखाका सुरक्षाका लागि वदाम उपयोगी फल भएकोले नेपालमा पनि व्यबसायिक खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको हो ।
धनुषामा आँप धेरै फल्यो
धर्वेन्द्र झा/उज्यालो । जनकपुरधाम, वैशाख १३ – यसवर्ष धनुषामा आँपको उत्पादन बढ्ने भएको छ । वेलावेलामा पानी परेपछि आँपको लागि मौसम अनुकुल भएकाले उत्पादन बढ्ने भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
तरकारीमा रोग लाग्यो ? टेलिफोन गर्नुस्
धादिङ, बैशाख १३– ‘तरकारीमा रोग लाग्यो ? अन्न वालीमा समस्या देखियो, फलफुल राम्रो फले न की ? चिन्ता नलिनुहोस । तपाईले अब खेतबारीबाटै फोन गरेर समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ ।
हिमाली जिल्लामा कृषि गणना शुरु
काठमाडौ, बैशाख ११– केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्र्तगत हिमाली जिल्लामा कृषि गणना कार्य शुरु गरेको छ । यसअघि विभागले गएको माघ १ गतेदेखि शुरु गरेर तराई र पहाडका ५९ जिल्लामा फागुन मसान्तमा कृषि गणना सम्पन्न गरेको थियो ।
प्यूठानमा गहुँ धेरै फल्यो
एलबी थापा/उज्यालो । प्यूठान, बैशाख ११ – मौसम राम्रो भएपछि प्यूठानमा यो वर्ष गहुँ उत्पादन बढेको छ । हिउँदमा पानी परेकाले गहुँ धेरै उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
२० हजार हेक्टर वनमा डढेलो
हेमराज शर्मा/उज्यालो । दाङ, बैशाख ११ – डढेलोले दाङका दुइ दर्जनभन्दा बढी वन क्षेत्रका २० हजार हेक्टरमा क्षति पुर्याएको छ । पुरन्धारा, हासीपुर, सोनपुर राजपुर, लक्ष्मीपुर, बेला, गोल्टाकुरी, पञ्चकुलेका सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा लागेको डढेलोले अहिलेसम्मकै धेरै क्षति गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
१४ फेब्रुअरीमा राष्ट्रिय दिवश मनाउन माग
काठमाडौ, बैशाख १०– सेभ द प्लानेट मिसन २०२० नेपालले प्रकृतिलाई माया गर्न आग्रह गर्दै १४ फेबु्रअरीलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन माग गरेको छ । पृथ्वी दिवसका अवसरमा काठमाडौमा कार्यक्रम गरी सेभ द प्लानेटले विभिन्न संघ संस्था र हरेक नेपालीसित प्रकृतिलाई माया गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
पृथ्वी दिवस आज मनाइँदै
काठमाडौं, बैशाख १० - आज अप्रिल २२ तारिख अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस । नेपाल सहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि यो दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाले यो दिवसमा कार्यक्रम गर्दैछन् ।
वन समूहले बनायो सभाहल
हेमराज शर्मा/उज्यालो । दाङ, बैशाख ९ – दाङको काभ्रे गाविस ३ जुम्लेपानीमा सामुदायिक वनको लगानीमा एक सय जना अट्ने सामुदायिक सभाहल बनाउन लागेको छ । जुम्लेपानीगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले दश लाख ८० हजार रुपैयाको लागतमा सामुदायिक सभाहल सहितको भवन बनाउन लागेको हो ।
एग्रो टेलि क्लिनिक सेवा प्रभावकारी
ललितपुर, बैशाख ९ - किसानलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन शुरु भएको एग्रो टेलि क्लिनिक सेवा प्रभावकारी देखिएको छ । बिहीबारदेखि शुरु भएको सेवामा देशका बिभिन्न ठाउँबाट किसानले फोन गरेर जिज्ञासा लिने गरेका तरकारी बीऊ उत्पादन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख तथा बरिष्ठ तरकारी विकास अधिकृत भरतप्रसाद पौडेलका अनुसार हरेक हप्ता बिहीबार र शुक्रबार किसानले फोन मार्फत खेतीपाती सम्बन्धी जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् ।
मकैका उन्नत चारवटा जात प्रस्ताब
काठमाडौ, बैशाख ८ – मकै खेती गर्ने किसानले अर्को वर्षसम्म थप चारवटा उन्नत जात प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले अरुण ४, अरुण ३, कर्णाली २ र रामपुर हाइब्रिड नामका जात सिफारिसको लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । यी जात, लगाएको ८० देखि एकसय १० दिनमा तयार हुने नार्कका मकैबाली विज्ञ नारायणबहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो ।
बनपाखामा चराको चहलपहल
काठमाडौ, बैशाख ७ – नेपालका वन पाखामा हिजोआज चराको चहल पहल बढी देखिएको छ । घरमा पालिएका र मानिसको नजिक बस्न रुचाउने चराहरु पनि हिजो आज निकै सक्रिय छन् । यो मौसम चराहरुको प्रजनन् क्रियाका लागि उत्तम समय हो ।
अम्लिसोको भाउ घटेपछि किसान मर्कामा
केशबप्रसाद भट्टराई/उज्यालो । ताप्लेजुङ, बैशाख ६– अम्लिसोको भाउ पाँच गुणा कम भएपछि किसानहरु मर्कामा परेका छन् । तीन बर्षपहिले प्रति क्वीन्टल आठ हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको अम्लिसो यसवर्ष एक हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेपछि किसान मर्कामा परेका हुन् ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा व्यापक वन फडानी
रामेछाप, बैशाख ६ - गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना अन्र्तगत संरक्षित जंगलमा व्यापक वन फडानी भएको छ । विना पुर्व जानकारी निजी वनको नाममा संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने रामेछाप र दोलखाको सिमानाको गुम्देल गाविस ९ स्थित सेरदुङ जंगलमा अनियन्त्रित रुपमा करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको २० हजार क्युफिट काठ काटिको छ । वन फडानी गरी निकासी गर्न लागिएको आयोजनाले जानकारी पाएपछि रोकिएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना दोलखाका प्रमुख सत्यनारायण शाहले जानकारी दिनुभयो ।
आज किसान दिवश
काठमाडौ, बैशाख ५ – भूमि अधिकारका बारेमा जनचेतना जगाउँदै मंगलवार अन्तर्राष्ट्रिय किसान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । भूमिमाथिको कब्जा अन्त्य गरी जोताहा किसानलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्न माग सहित विश्वव्यापी रुपमा मनाईने दिवसका अवसरमा नेपालमा कार्यक्रम गरिंदैछ ।
भारतवाट अवैध कुखुरा भित्रिएपछि किसान मारमा
नेपालगञ्ज, वैशाख ४ – भारतका सीमावर्ती बजारबाट भन्सार छलेर नेपालगञ्जमा वोइलर कुखुरा भित्रिन थालेपछि कुखरापालक किसानहरु मर्कामा परेका छन् । विना भन्सार आउने तस्करीको कुखुरा नेपाली किसानले पालेको भन्दा सस्तोमा पाइने हुँदा मासु व्यवसायीले भारतकै कुखुरा किन्ने गरेका छन् ।
विदेशको अनुभवले गाउँमै च्याउ खेती
दमन राई/उज्यालो । खोटाङ, बैशाख २ – मन लगाएर काम गर्ने हो भने गाउँमा बसेर पनि विदेशमा भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभएको छ खोटाङको लफ्याङ गाविसका जीतबहादुर राईले । रोजगारीका लागि १५ वर्ष विदेशमा बसेका राईले अहिले आफ्नै गाउँमा च्याउ खेती गरेर महिनामा झण्डै ५० हजार रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ । उहाँले दिनमा ७ किलोसम्म च्याउ बेच्नुहुन्छ, जुन १ किलोको ३ सय रुपैयाँ पर्छ ।
नयाँ वर्षमा निशुल्क मह
मोहन बस्याल/उज्यालो । चितवन, बैशाख १ – नयाँ बर्षको अवसरमा चितवनका मौरीपालक किसानहरुले सर्बसाधारणलाई निशुल्क मह चखाएका छन् । मौरीपालक महासंघको अगुवाईमा २५ किलो मह वितरण गरिएको महासंघ चितवनका अध्यक्ष हिमलाल पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
स्वर्गद्वारीको वन संरक्षण कार्ययोजना तयार
एलबी थापा/उज्यालो । प्यूठान, बैशाख १ – स्वर्गद्वारी बन क्षेत्र वरपर वन मासिदै जान थालेपछि संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाइएको छ । स्वर्गद्वारीको ४ सय कित्ता नम्वरको ८ हजार ५ सय २९ रोपनी क्षेत्रफलको वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि कार्य योजना तयार पारिएको हो ।
बंगुर पालनमा सिपालु थारु महिला
भावुक योगी/उज्यालो । बर्दिया, चैत ३० – हिजोआज व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गर्नेहरु निकै बढेका छन् । तीमध्ये कतिपय सफल हुन्छन् भने कतिपयले वीचमै छाड्छन् । बर्दिया धधवार गाविसको दुध्याका महिलाहरुले तीन वर्षअघि शुरु गरेको ब्यवसायिक बंगुरपालन आम्दानीको श्रोत मात्र बनेको छैन अरुका लागि सिक्ने ठाउँ पनि बनेको छ ।